एक पटक भत्काएर फेरि बनाइको शान्ति स्तूपको १८ वर्षे संघर्ष गाथा - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७९, सोमबार १०:१३
आज २५६६ बुद्ध जयन्ती । बौद्ध धर्माबलम्बीहरूको लागि आजको दिन विशेष हो । नेपालको २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै बौद्ध धर्मावलम्बी छन् । तर यसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले ‘मित्थ्यांक’ भन्दै बुद्ध धर्म मान्नेहरू अझै धेरै सङ्ख्यामा रहेको दाबी गर्छन्। बुद्ध धर्मावलम्बीका साथै पोखराको पर्यटनका लागि एक विशेष महत्व बोकेको ठाउँ हो पोखरा महानगरपालिका वडा नं २२ अनदु डाँडामा रहेको विश्व शान्ति स्तूप। दैनिकी १ हजार देखि १५ सय सम्म पर्यटकहरू अवलोकनका लागि विश्व शान्ति स्तूप पुग्छन् । आजको विश्व शान्ति स्तूप बनाउनका लागि १८ वर्षसम्म यहाँका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले संघर्ष गर्नुपर्‍यो र अझै पनि विश्व शान्ति स्तूपलाई संरक्षण गरिरहन संघर्ष गरिरहेका छन् । विश्व शान्ति स्तूप– वास्तवमा एउटा प्रतीक हो राज्य र राज्यका संरचनाहरूले नेपालमा बुद्ध धर्म र यसका अनुयायीहरूलाई गर्ने व्यवहारको।
बौद्ध धार्मिक संस्था जापानको निप्पोनजान म्याहोजीका श्रद्धेय गुरु निचिदात्सु फुजीले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै त्यतिबेला परमाणु बम खसालेर ध्वस्त पारिएका नागासाकी र हिरोसिमामा पहिलोपटक विश्व शान्ति स्तूप निर्माण गरे। त्यसपश्चात् बुद्ध धर्म र शान्तिको सन्देश फैलाउन विश्व शान्ति अभियान स्वरुप विश्व शान्ति स्तूप बनाउने अठोट उनले लिए। त्यसै अनुरूप नै नेपालको बौद्ध समाजका अध्यक्ष प्रेमबहादुर शाक्यको निमन्त्रणामा फुजी गुरु वि.स‍ं. २०२९ सालमा नेपाल आए। नेपाल गरिसकेपश्चात् विश्व शान्ति स्तूप बनाउनका लागि लुम्बिनी र काठमाडौंका ठाउँहरू हेरे। त्यतिबेलाका तत्कालीन राजा विरेन्द्रसँग पनि यसबारेमा छलफल भएर अनुमति दिइएको जानकारहरू बताउँछन्। तर पछि यी दुवै ठाउँहरू शान्ति स्तूप बनाउनका लागि दिइएन। त्यसपश्चात् पोखराबाट अनागारिका धर्मशीला गुरुमा र पूर्वमन्त्री मीनबहादुर गुरुङले फुजी गुरुलाई भेटेर पोखरामा विश्व शान्ति स्तूपको निर्माण गर्ने अवधारणाका दिनुभयो। पूर्वमन्त्री गुरुङले पोखरा नजिकैको फेवातालको पारी अनदु डाँडामा रहेको आफ्नै जग्गा विश्व शान्ति स्तूपका लागि दान दिने बताए। त्यसपश्चात् गुरु फुजीसँगै बौद्ध धार्मिक संस्था, बौद्ध धर्मावलम्बी, शान्ति प्रेमी व्यक्तिहरू मिलेर शान्ति स्तूप निर्माणको काम अघि बढाए।
पोखरा अनदु डाँडामा रहेको २१ रोपनी जग्गामा वि.सं. २०३० भाद्र २७ पूर्णिमाको दिनमा फुजी गुरुले विश्व शान्ति स्तूपको शिलान्यास गरे। त्यसलगत्तै बुद्धको मुर्तिको पनि त्यहाँ स्थापना गरियो। नेपालभर रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सहयोग र फुजी गुरुबाट संकलित रकमले नै प्यागोडा शैलीमा शान्ति स्तूपको निर्माण कार्य सुरु भयो। पञ्चायतकालीन व्यवस्था रहेको सो समयमा २०३० साल मंसिर १७ मा पोखरा नगर क्षेत्रमा नगर योजना लागू भयो। नगर योजना कार्यन्वयन समितिका अध्यक्ष तथा अञ्चालाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वले वन फँडानी, शान्ति स्तूपले राजाको रत्न मन्दिरमा ल्याउने खतरालगायतका अनेकन कारण देखाउँदै ३५ फिट अग्लो बनिसकेको शान्ति स्तूपलाई २०३१ को साउन १३ मा तोडफोड गरि भत्काइयो। त्यहाँ निर्माण भइसकेका बौद्ध प्रार्थना हल, अतिथि गृह लगायतका बौद्ध सम्पदाहरू पनि भत्काइयो। त्यहाँ स्थापित ६ फिट उचाइको बुद्ध मूर्ति पनि टुक्रा पारेपछि पोखराको माटेपानी गुम्बामा लगेर राखियो। विश्व शान्ति स्तूप समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा अग्रज पत्रकार तिलकमान गुभाजु भन्छन्, ‘पोखरामा नगर योजनाले पहिलो र अन्तिम पटक भत्काएको पूर्वाधार नै यही मात्र हुनुपर्छ। बौद्ध सम्पदा र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि महत्वपूर्ण छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र गल्ती नहुदाँ पनि उक्त कदम चालिनु दुखद घटना थियो।’ सोही समयमा शान्ति स्तूप निर्माणमा सक्रिय रहेका संस्थापक तथा पूर्वमन्त्री मीनबहादुर गुरुङलाई १८ महिना जेल र उनको छोरा कृष्णबहादुर गुरुङलाई ६ महिना जेलमा राखिएको थियो। त्यसको केही समयपश्चात् २०३१ कात्तिकमा सरकारले भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थवीरको नाममा नेपालीहरूद्वारा सुहाउँदो साइज १२ देखि १५ फीटको उचाइमा चैत्य सो ठाउँमा बनाउन स्वीकृति दियो तर त्यो निकै सानो भएको भन्दै फुजी गुरु र धार्मिक संस्थाका साथै व्यक्तिहरूले मानेनन्। त्यस घटनापश्चात शान्ति स्तूप निर्माणको कार्य नै रोकियो।
शान्ति स्तूपको निर्माण कार्य रोकिएपनि वर्षेनी अनदु डाँडामा बुद्ध पुजाका कार्यहरू निरन्तर भइरहन्थे। विश्व शान्ति अभियानका संस्थापक फुजी गुरुको २०४१ सालमा निधन भयो। त्यसलगत्तै संस्थापिका अनागारिका धर्मशीला गुरुमाको पनि २०४३ मा निधन भयो। पोखरामा विश्व शान्ति स्तूप निर्माण गर्न लागिपरेका मुख्य खम्बाहरू नै गुमाएपछि स्तूप निर्माणको योजना त्यत्तिकै हराउने भयो भन्ने धेरैलाई चिन्ता थियो। तर २०४४ सालमा अनागारिका धर्मशीला गुरुमाको पहिलो वार्षिकीमा भएको महापरित्राण र बौद्ध सम्मेलनबाट विश्व शान्ति स्तूप पुनःनिर्माण राष्ट्रिय समिति गठन भयो। जसको अध्यक्षमा भिक्षु सुदर्शन रहेको थियो। सोही समितिको महासचिव रहनुभएको अग्रज पत्रकार गुभाजुले सो समितिले नेपालभर नै हुने हरेक बौद्ध सम्मेलन, शान्ति पुजासंगै अन्य कार्यक्रमहरू पनि पुगेर त्यतिबेला विश्व शान्ति स्तूपको बारेमा प्रचार गरेको बताए। त्यसलगत्तै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चौतर्फी दबाब र शान्ति स्तूपको पुनः निर्माण राष्ट्रिय मुद्धा बन्दै गएपछि विश्व शान्ति स्तूप निर्माणका लागि सरकारले नै निर्देशन दिनुपर्‍यो। उनले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसंगै पोखरामा शान्ति स्तूप निर्माणको बाटो सहज बन्न पुगेको बताए। त्यसलगत्तै २०४९ साल जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्धारा विश्व शान्ति स्तूपको पुन शिलान्यास गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। शान्ति स्तूप निर्माणका लागि फुजी गुरु नरहेपनि उनको धार्मिक संस्था निप्पोनजान म्याहोजी र नेपाली सहयोगी दाताहरूबाट पुनःनिर्माणको कार्य सुरु भयो। गुभाजुले बाटो नभएको त्यससमयमा पोखराको छोरेपाटनबाट नै बालुवासँगै अन्य सामान मानिसले बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था भएको बताए। उनले भने, ‘पोखराको बजारबाट छोरेपाटनसम्म बालुवा लैजानुपर्ने र त्यसपछि छोरपाटनबाट माथि डाँडासम्म बालुवा लैजादाँ एकजना भरियाले एउटा बोराको १७, १८ रुपैयासम्म लिएका थिए।’
प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको सेतो रङ्गको शान्ति स्तूपबाट पोखराको फेवातालको सुन्दरता नियाल्न सकिन्छ। यस्तै माछापुच्छ्रे, धौलागिरि, अन्नपूर्ण हिमश्रृखंलाहरूको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। २१ रोपनीको क्षेत्रफलमा ११५ फिट उचाइ र ३४४ फिट गोलाइको रुपमा शान्ति स्तूप फैलिएको छ । विश्व शान्ति स्तूपमा रहेका हरेक भागहरूको आआफ्नो महत्व छ। शान्ति स्तूपमा मुख्य गरि चार दिशामा बौद्धका चार धामका प्रतीक स्वरुप बुद्धका मूर्तिहरू प्रतिस्थापन गरिएको विश्व शान्ति स्तूप समितिका अध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यले बताए। स्तूपको अग्रभागमा जापानमा बनेको बुद्धको धर्मचक्र प्रवर्द्धनको मुद्राको बुद्ध मूर्ति राखिएको छ, दक्षिण भागमा बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीको प्रतीकको रुपमा नेपालमा नै बनेको बुद्ध मूर्ति रहेको छ, पश्चिमी भागमा ध्यान मुद्रामा रहेको श्रीलङ्काबाट ल्याइएको बुद्ध मूर्ति छ र अन्तिममा उत्तर तर्फ थाइल्याण्डबाट ल्याइएको बुद्धको महापरिनिर्वाणको मूर्ति प्रतिस्थापित गरिएको छ। यस्तै उहाँले स्तूपको माथि टुप्पामा रहेको गजुरमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूबाट प्राप्त सुन गहनालाई संकलन गरि सुनको जलप लगाइएको बताउनुभयो। उक्त गजुरको तल करुणाको प्रतीक ठूलो स्फटिक (क्रिष्टलका ढुङ्गा) जडान गरिएको छ जुन श्रीलङ्काबाट प्राप्त भएको थियो। स्तूपको यही माथिल्लो मागको डोममा भगवान बुद्धको दुर्लभ एवं पवित्र अस्थिधातु राखिएको छ। स्तूपको मूर्ति भएको माथि पेटीमा घुम्नका लागि १०८ कदमहरू चाल्नुपर्ने गरि बनाइएको छ भने तलको पेटीमा त्यसको दोब्बर २१६ कदम चालेर परिक्रमा गरिनुपर्ने गरि बनाइएको छ। त्यहाँ रहेका शुरुका ३८ सिँढीहरू ३८ उत्तम मङ्गलका प्रतीक र माथि रहेका १२ सिँढी प्रतीच्य समुत्पादका प्रतीक रहेको बुद्धाचार्य बताउछन्।
पोखरामा धेरैले शान्ति स्तूप भनेर अहिले पनि चिन्दैनन्। विदेशी पर्यटकहरूले पीस पगोडा भनेर चिन्छन् र पोखरामा भने चाइनिज गुम्बा भनेर परिचित हुन पुग्यो। सवारी चालक देखि टुरिस्ट गाइडसम्मले चाइनिज गुम्बा भन्ने गरेका छन्। चाइनिज गुम्बा कसरी कहलिन पुग्यो भन्ने विषय पत्ता नलागेपछि शान्ति स्तूप समितिले धेरै अघि नै यसको नाम बारे जनचेतना जगाउने गतिविधि अघि बढायो। यसका लागि होटल व्यवसायी, सवारी चालक (ट्याक्सी), टुरिस्ट गाइड लगायतलाई राखेर नै विश्व शान्ति स्तूप भन्नका लागि अनुरोध सहित जनचेतनाको काम गरिएको पूर्व अध्यक्ष गुभाजु बताउछन्।
२०७२ सालमा शान्ति स्तूप नजिकै पहिरो जाँदा स्तूपको फेवाताल पट्टीको भाग नै पहिरोले लैजाने जोखिममा पर्‍यो। त्यसक्रममा दुई हप्ताभन्दा बढी समयका लागि स्तूप बन्द गरिएको थियो। सो समयमा पोखराको होटल व्यवसायी, ट्याक्सी चालक, स्तूपमा रहेका ४० बढी साना तथा ठूला रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको अनुभव विश्व शान्ति स्तूप समितिका निवर्तमान अध्यक्ष शंकर गुरुङसँग छ। उहाँले त्यतिबेला स्तूप बन्द भएकाले नै पोखराको पर्यटकीय गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै त्यतिबेला छिट्टो स्तूप खुलाउनका लागि काम गर्न अनुरोधहरू आएको बताए। नयाँ वर्ष २०७९ को दिनमा ५५ सय को हाराहारीमा पर्यटक त्यहाँ आएको समितिका हालका अध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यले बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कोभिडले यस वर्ष थोरै भएको हो एकैदिन ७, ८ हजार सम्म पनि आएका छन्। अहिले दिनहुँ १ हजार देखि १५ सय सम्म त आएकै हुन्छन्। पोखरामा आउने पर्यटक शान्ति स्तूप पुगेकै हुन्छन्।’
पोखराको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले विश्व शान्ति स्तूपले निकै महत्वपूर्ण राखेको छ। नेपालको पहिलो विश्व शान्ति स्तूप पोखरामा हुनु गर्वको विषय पनि रहेको समितिका अध्यक्ष बुद्धाचार्य बताउछन्। यति महत्व र गर्वको विषय हुँदा पनि यसको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारी पक्षबाट पर्याप्त सहयोग नभएको उनी बताउछन्। स्तूपको मर्मतसम्भार देखि स्तूप सञ्चालनका लागि रहेका ६ जना कर्मचारीहरूका तलब र अन्य खर्चहरूको जोहो त्यहाँ आउने पर्यटकहरूले दिएका सीमित दान सहयोग नै हुन्। बुद्धाचार्य भन्छन्, ‘शान्ति स्तुपको निर्माणपछि पोखराको पर्यटकहरूको बसाइ लम्बिएको छ, त्यहाँ रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू विदेशिन परेको छैन, पोखरा आउने हरेक मान्छे एकपटक स्तूप पुगेकै हुन्छन्, यतिका महत्व बोकेको स्तूपमा आज भन्दा २० वर्षअघि जुन पूर्वाधार थियो त्यो भन्दा अरु थप केही बन्न सकेको छैन। हाम्रो लागि सरकारबाट बजेट विनियोजन नै नहुनु निकै विडम्बना हो। त्यतिधेरै पर्यटक आइरहँदा हामीले पर्याप्त शौचालय बनाउन सकेका छैनौ, त्यति ठूलो ठाउँमा सरसफाइ गर्न थोरै कर्मचारी हुनुहुन्छ, जुन पर्याप्त होइन। यस्तो महत्व बोकेको ठाउँको संरक्षणमा ध्यान नजानु दुःखद हो।’ शान्ति स्तूपमा अहिले शौचालयको व्यवस्था, खानेपानी, पानी पर्दा ओत लाग्ने व्यवस्था, वर्षेनी आउने पहिरो जोखिमबाट संरक्षण, मर्मत सम्भार लगायतका पूर्वाधारका कार्यहरू अझै गर्न बाँकी रहेको उनी बताउछन्। शान्ति स्तूप प्रवेशका लागि अहिलेसम्म शुल्क लिइएको छैन। यसकारण पनि स्तूप सञ्चालनको लागि आयस्रोत भनेको नै दान सहयोग मात्रै हो जुन पर्याप्त नभएको बताउँदै उहाँले शान्ति स्तूपको संरक्षणको विषय सरकारको कार्ययोजना तथा बजेट विनियोजनमा पनि पर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तराष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो [ फोटाे फिचर ]
दैलेखमा रोपाइँको चटारो, समयमै पानी पर्दा किसान खुशी
मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरू [ फोटोफिचर ]
खोकनावासीलाई रोपाइँको चटारो [ फोटो फिचर ]